मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य स्थिर, अझै खाली पेट – Halkhabar kura
२२ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ०९:१२
मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य स्थिर, अझै खाली पेट
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सफल मिर्गौला प्रत्यारोपण भएपछिको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको चिकित्सकहरुले जनाएका छन् । बुधबार मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि आईसीयूमा सारिएका ओलीको स्वास्थ्य सूचक राम्रो रहेको भनिए पनि अहिलेसम्म ओलीलाई खाली पेट नै राखिएको छ ।
मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको १२ घण्टा बढि हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई कालो चिया समेत खान नदिइएको हो । टिचिङ अस्पतालमै रहेका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरु आउँने क्रम सुरु भएको छ ।
‘उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरु आउनेक्रम सुरु भएको छ, प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेसम्म केही खाने कुरा दिइएको छैन,’ थापाले भने ‘डाक्टरहरुले स्वास्थ्य अवस्था बुझेर आवश्कय निर्णय गर्नुहुनेछ ।’
अस्पतालमा अहिले त्रिवि शिक्षण कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. प्रेमकृष्ण खड्गा पुगिसेका छन् । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे दैनिक कति पटक सूचना जारी गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल चलिरहेको थापाले जानकारी दिए । दैनिक एक पटक दिइने वा दुई पटक भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ ।
दुइ पटक दिइने भएमा विहान ११ र साँझ ६ बजेको समयमा आवश्यक सूचना सार्वजनिक गरिने उनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो हुँदै गएमा ५-६ दिनमा डिस्चार्ज गरिने चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
मिर्गौला प्रत्यारोपण सकिएको १५ मिनेटपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार आधा लिटर पिसाव गरेका थिए । शल्यक्रियाको नेतृत्वको गरेका डा. प्रेम ज्ञवालीका अनुसार प्रत्यारोपणको करिब डेढ घण्टापछि ओलीको होस खुलेको थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको शल्यक्रिया कक्षमा प्रवेश गर्नुअघि बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफन्त र शुभचिन्तकलाई चिन्ता नलिन र नआत्तिन आग्रह गर्दै भने, ‘मलाई राम्रो हुन्छ, नराम्रो भए पनि आफ्नो देशको माटोमा उपचार हुने भएकाले चिन्ता लिन आवश्यक छैन, जे हुन्छ राम्रै हुन्छ।’
प्रधानमन्त्रीले आफ्नै देशको माटोमा उपचार गराएकाले आफूलाई जे भए पनि फरक नपर्ने र ढुक्क रहन पटकपटक आफन्त र शुभचिन्तकलाई आग्रह गरेको जानकारी वरिष्ठ चिकित्सक अरुण साय्मिले दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई भिभिआइपी कक्षको ६०१ शड्ढयाबाट शल्यक्रिया कक्षमा लग्दा बिहान ९ बजेर ५७ मिनेट गएको थियो। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रेमकृष्ण खड्काले बिहान ९ बजेदेखि प्रधामन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण सुरु हुने जानकारी दिए पनि तयारी गर्दा करिब एक घण्टा ढिला उनलाई शल्यक्रिया कक्षमा लगिएको थियो।
मिर्गौैला दिने समीक्षा ज्ञवालीलाई एक घण्टाअघि नै शल्यक्रिया कक्षमा राखेर मिर्गौला झिक्न शल्यक्रिया थालिसकिएको थियो। ओलीलाई शल्यक्रिया कक्षमा लग्दा उनको पछाडि मन्त्री, सल्लाहकार र चिकित्सक टोली पछिपछि थियो।
ओलीलाई शल्यक्रिया कक्षमा प्रवेश गराइएपछि चिकित्सकबाहेक अरु बाहिरिएका थिए। ओलीलाई शल्यक्रिया कक्षतर्फ लगिँदा सुरक्षाकर्मीको पनि बाक्लो उपस्थिति थियो।
ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने टोलीको नेतृत्व गरेका डा। प्रेम ज्ञवालीले प्रक्रिया सुरु गरेको जनाउ दिँदा १० बजेर दुई मिनेट गएको थियो।
ओलीको स्वास्थ्य लाभको कामना गरी ‘प्ले कार्ड’ बोक्ने पनि अस्पताल परिसरमा देखिन्थे। बेलाबेला अस्पताल परिसरमा रहेका शुभेच्छुकले ओलीको स्वास्थ्यलाभ कामना गर्दै नारा लगाएको सुनिन्थ्यो।
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक खड्काको कार्यकक्षबाहिर ओलीको सुस्वास्थ्यको कामना गर्न पुगेका भिआइपी र पाहुना बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
अस्पताल परिसरको सुरक्षा व्यवस्था हेर्न महानगरीय प्रहरी आयुक्त डिआइजी विश्वराज पोखरेल महाराजगन्ज बृत्तका डिएसपी उमेश लम्सालसहित उपस्थित थिए।
डा.साय्मिले केही सञ्चारकर्मीलाई मिर्गौला प्रत्यारोण सफल भएको जानकारी गराउँदा प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य अस्पताल प्रवेश गर्दै थिइन्। डा.साय्मिले शल्यक्रिया भइरहेको समयमा बेलाबेलामा बाहिर निस्केर भित्र भइरहेको गतिविधि जानकारी गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई मिर्र्गौला दोस्रोपटक प्रत्यारोपण गर्न अमेरिका र सिंगापुर जान पनि सुझाव दिइएको थियो। उनी निकट व्यक्ति र चिकित्सकले पनि विदेशमा गएर प्रत्यारोपण गर्दा राम्रो हुने सल्लाह दिएका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले जे भए पनि आफ्नै माटोमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने अडान लिएपछि शिक्षण अस्पतालमै प्रत्यारोपण गरिएको हो।
Previous प्रधानमन्त्री ओली उपचारको उत्साह, ‘जे हुन्छ राम्रै हुन्छ’
Next नेपाली काँग्रेसले पाँच लाख क्रियाशील सदस्यलाई प्रशिक्षण दिने